ब्लग/विचार – Page3– दाङ खबर
Sep302018 by दाङ खबरNo Comments
मेटमणि चौधरी दाङ जिल्ला क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य हुन्। सामान्य किसान परिवारमा जन्मेका मेटमणि नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको भूमिकामा पनि छन्। अर्थ क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान राख्नुको साथै भूमिको क्षेत्रमा पनि अब्बल छन्। उनी भन्छन्– ‘नेपालको भूगोल क्षेत्रफलमा ६ सय ८५ स्क्वाइर किमि बढेको छ। अबदेखि नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ८ सय ३९ वर्ग किमि भएको छ। सबै विषयमा राम्रो दख्खल राख्ने मेटमणि राजनीति शास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेका छन्। मेटमणि चौधरी भन्छन्– ‘नेपालको क्षेत्रफल ६ सय ८५ स्क्वाइर किमिले बढ्यो। यसैले भूगोलको नापी जीआईएस विधिबाट गर्नुपर्दछ।’ यसै विषयमा मेटमणि चौधरीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि सन्तोष खनालले गरेको कुराकानी: समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि पहिलो प्राथमिकताको सूचिमा राख्नु पर्ने क्षेत्र कुन हो ? भूमि क्षेत्र नै हो । यसको ब्यवस्
Sep182018 by DangkhabarNo Comments
तीजले छाडेर गएको सन्देश (भिडियाेसहित)
दाङ, असोज २ । हिन्दु महिलाहरुको महान् पर्व हरितालिका तीज हालै सकिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुझैं यस वर्ष पनि तीजको उल्लासमा महिलाहरु झुमेका छन् । जतिजति समय घर्किदैछ, त्यतित्यति पछाडिका तीजहरुमा बिकृति र बिसङ्गति भित्रिदै गएका छन् । अघिल्ला वर्षहरु भन्दा यस वर्ष अलि बढी बिकृति देखिए । तीजको एक महिला अगाडिदेखि नै होटेल बुक गरेर दरखाने कार्यक्रम आयोजना गरिए । तीजमा दुःख सुखका गीत भन्दा अस्लिल गीतहरु बढी घन्किए । दरका नाममा मासु, चिउरा, ह्वीस्की वियर खाँदै रमाइलो गरिएको पनि देखियो । विभिन्न संघसंस्थाहरुले तीजलाई विकृतिरहित बनाउन अभियान थालेको यदाकदा देखिए तापनि त्यो भन्दा बढी तीजमा कपडा र गहना प्रदर्शन गरिएको देखियो । उसको भन्दा महंगो साडी, गहना लगाउँछु, भन्ने देखासिकीले अलि बढी स्थान लिएको देखियो । तीजकै बीचमा हाम्रा मौलिक सांस्कृतिक पक्ष्यहरु पनि कतैकतै देखिए । मादलु र बाँसुरीको तालमा क
Sep162018 by DangkhabarNo Comments
लक्की चौधरी/ थारु ‘अत्वारी’ पर्व ‘आइतबारी’बाट अपभ्रंश हुँदै अतवारी अर्थात् ‘अत्वारी’ भयो । आइतबार पर्ने पर्व भएकाले त्यस्तो नाम जुरेको हो । नेपाली भित्तेपात्रोले यो पर्वलाई चिन्दैन । त्यसैले यो पर्वको कुनै निश्चित तिथि मिति छैन । न त गैरथारु समुदायले यस पर्वबारे कुनै चासो नै राख्ने गर्छन् । कारण, यो पर्व नितान्त थारु समुदायको मौलिक पहिचान बोकेको पर्व हो । हरेक वर्ष भाद्र महिनामा पर्ने यस पर्व कृष्णजन्माष्टमी पछिको दोस्रो आइतबार पर्छ । यो पर्वको तिथि त्यही हो । यस वर्ष भदौ ३१ गते आइतबारको दिन अत्वारी पर्व परेको छ । पश्चिम तराईका थारुबहुल जिल्लामा यसको तयारी धुमधामकासाथ गरिएको छ । थारु पुरुषहरुले वर्षको एकदिन व्रत बस्छन् । त्यो पर्व नै अत्वारी हो । थारु महिलाहरुले कृष्णजन्माष्टमी अर्थात् अष्टिम्की (थारु भाषामा) मा व्रत बस्छन् । तीज पर्व थारु समुदायको परम्परागत पर्व होइन, जहाँ नेपाली महिला
Sep122018 by DangkhabarNo Comments
तीज पर्व–हिजो र आज
प्रतिमा केसी-यतिबेला घरदेश होस् वा परदेश हाम्रो नेपाली समाज तीजको माहोलले निकै तताएको कुरा सामाजिक सञ्जालहरुमा देख्न तथा पढ्न पाइन्छ । यसैगरी महिनौं अघिदेखि यस्तो नाचगान र खानपानको गर्मी बढेर जाने हो भने हामीले यसलाई आर्थिक हिसावले थेग्न सकिएला ? अथवा भनौं हामीले हाम्रो यो सांस्कृतिक चाड तीजलाई तीजकै रुपमा बचाउन सकिएला ? भन्ने कुराले मनमा डेरा जमाइरहेको छ निकै समयदेखि घच्घचाइरहेको छ। विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई तीजको कार्यक्रम आयोजना गर्न, कलाकारहरुलाई गीत गाउन र म्युजिक भिडियो बनाउन, आफन्तजनहरुलाई तीजको दर खुवाउन, पसलेहरुलाई साडी र सुन बेच्न भ्याइनभ्याइ छ । लाग्छ, हाम्रा चाडवाडको ‘रानी चाड’ नै तीज हो । ‘वेलायतको वक्ताको कुनो’ जस्तै नेपाली महिलाहरुका लागि तीज भएको हुनुपर्छ सायद । हाम्रो नेपाली समाज र हिन्दु संस्कृति अनुसार तीज, दसँैं र तिहार हाम्रा महान राष्ट्रिय पर्व हुन् । विहे गरेर पर
Sep12018 by DangkhabarNo Comments
वर्षौं देखि नेपाली कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको सपना पुरा भएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि कम्युनिष्ट कार्यकर्ता बीचमा हर्षको लहर पैदा भयो । विगतदेखि बहुमत कम्युनिष्ट टुक्रा टुक्रामा विभाजित थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण पछि नेपालमा ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त सरकार समेत बनेको छ । यससँगै जिल्लामा हुने पार्टीको नेतृत्वका लागि प्रक्रिया सुरुभएको छ । दाङबाट अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएका शिवकुमार आचार्य को हुन् ? दाङ खबरका कार्यकारी सम्पादक नवीन अभिलाषीले तयार पार्नुभएको व्यक्तित्व चर्चा : (सम्पादक) । स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोल थियो । नेकपा एमालेको तर्फबाट घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका थिए नरुलाल चौधरीले । केपी ओलीको राष्ट्रबादले एमाले प्रति जनताको विस्वास ह्वात्तै बढेको थियो । तर कमजोर थिएनन् प्रतिस्पर्धी शक्तिहरु । एमाले कि गर्ने कि मर्नेको
Aug312018 by DangkhabarNo Comments
शान्त तलाउको नयाँ कृतिमान
दाङ, भदौ १५ । तुफानबाबु रेडियो कार्यक्रम पर्याय जस्तै बनेका छन् । उनी जीवनका विभिन्न घुम्तीहरुमा फरक फरक ढँगले हिडे । तर, साथमा रेडियोप्रतिको अनुरागलाई भने उनले कहिल्यै छाडेनन् । ‘रेडियो कै कारण मेरो जीवन सुन्दर बनेको हो’, अनुहारमा सधैँ हिस्सी बोकेर हिड्ने श्रेष्ठले भने । तुलसीपुरमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको रेडियो तुलसीपुरमा करिव १५ वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालनमा आएको उनको कार्यक्रम शान्त तलाउले भोलि नयाँ किर्तिमान राख्दै १ सय ५० अंक पुरा गर्दैछ । ‘मेरो रेडियो पत्रकारिताको करिअर यसै कार्यक्रमबाट आरम्भ भएको हो’, श्रेष्ठले भने । पछिल्लो पटक कार्यक्रम शान्त तलाउलाई रेडियो प्रकृतिमा उत्पादन गरेर विभिन्न एफ.एम.बाट प्रशारण गर्दै आएका श्रेष्ठले रेडियो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउने सोच बनाएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालनको १५ वर्षे दौरानमा उनले विभिन्न स्टेशनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे । ‘सबै रेडियोमा
Aug302018 by DangkhabarNo Comments
शनिबारको मौलाकोट डायरी…
माधव केसी / झरी विनाको जीवन अधुरो रहन्छ, जलमग्न धर्ति अनि वादलुले छोपेको आकाश नै जीवन पलाउने, टुसाउने अनि श्रृजनाको मूल फुटाउने कारक रहेछ । विशाल उपत्यका दाङ्ग को साहित्यीक धर्तिमा नयाँ आयाम थप गर्न उदाहरण समुह, नेपाल लागि परेकै छ । जेसीजग्राम मौलाकोटमा झरी साहित्यको तेस्रो गन्तब्य यसपाली भिन्न तरिकाले भाद्र ९, २०७५ शनिवार मा सम्पन्न भएको छ । जेसीजग्राम मौलाकोट को संयोजक रहेका कारण म पनि त्रिभुवननगर जेसीज समेतको आतिथ्यमा सम्पन्न भएको तालिम कार्यक्रम छाडेर लागे मौलाकोट झरी साहित्य तर्फ । घोराहीको तुलसीपुर चोकबाट उदाहरण समूह, नेपालका साथीहरु र आई.एम.ई. लि. का राप्ती प्रमुख सोम नेम्वाङ्ग सर समेत एघार जना हामी दुईवटा अटोमा यात्रा थालियो । बाह्रकुने दहसम्म पुग्नै लाग्दा सोम सरको साथी हराएको पलमा पितृलाई सम्झदै मौलाकोट प्रतिको झापाली मोह र झरी समेटिएको कविता वाचन सुन्यौ । हामी उत्साही
डाक्टर पुष्प भुसाल, विशेषज्ञ चिकित्सकको रुपमा चार वर्ष देखि कार्यरत हुनुहुन्छ । लमही नगरपालिका वडा नम्बर ५ निबासी डा. भुषाल लमही फ्लोरेन्स अस्पतालमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहा आफैले अस्पताल सञ्चालन गरेर विरामीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिईरहनु भएको छ । अस्पतालको सेवा सुविधा र चिकित्सा क्षेत्रका विषयमा लमही सम्बाददाता शिवु खनालले डा. पुष्प भुषाल संग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप : १ स्वास्थ्यकर्मी भएर आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दा कस्तो महशुस गर्नुभएको छ ? म एक चिकित्सक भएको नाताले जहाँ जुनसुकै ठाउँमा भएपनि बिरामीको सेवामा खटिनु पर्दछ, त्यसमाथी म आफु हुर्केको ठाउँ तथा सम्पूर्ण देउखुरी बासी, परीवारजन, शुभचिन्तक उहाँहरुको सेवामा खटिदा पक्कैपनी सन्तोसजनक छु । २ सामान्यतया चिकित्सक शिक्षा लिएपछी शहरी क्षेत्र रोज्ने कि त विदेश पलायन हुने समस्या छ तर यहाँ त आफ्नै क्षेत्रमा लाग्नु भयो ? केहि हदस
Aug222018 by DangkhabarNo Comments
यस्तो छ ‘डिस होम फ्री अफर’
दाङ, भदौ ६ । एक मात्र स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित डिटिएच सेवा प्रदायक, डिसहोमले उपभोक्ताहरु माझ ‘डिस होम फ्री अफर’ नामक योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले डिसहोम रिचार्ज गर्दा जडान उपकरण सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । दाङ लगाएत साविक राप्ती अञ्चलमा करिब १ लाख ग्राहकहरुले डिसहोम नियमित रुपमा हेरिरहेका छन् । यो योजना २०७५ भाद्र १ गते सुरु भई पौष समान्तसम्मको लागी लागु हुनेछ । सरकारले लागू गरेको अनिवार्य डिजिटलाइजेसनको नीति नेपालभर लागु भइसकेको अवस्थामा ग्राहकहरुलाई सजिलै गुणस्तरीय डिसहोमको सेवा प्रदान गर्न यो योजना लागू गरिएको राप्ती अञ्चलको आधिकारीक विक्रेता नमुना स्याटलाईट घोराही १४ का सञ्चालक राज रानाले बताउनुभयो । ‘डिस होम फ्री अफर’ अन्र्तगत दुई प्रकारका अफरहरु रहेका छन् । प्रिमियम एचडि र लाईफस्टायल एचडीको सेवा अन्र्तगत ५ हजार रुपैयामा डिसहोम जडान गर्न सकिने र ८
बलात्कार एक जघन्य अपराध : कारण र निराकरण
हिरासिंह राना साउन महिना थियो । म आफ्नै कार्यमा व्यस्त थिए । मेरो घरमा बिहानै राष्ट्रीय तथा स्थानिय पत्रपत्रिकाहरु आइपुगे । ति पत्रपत्रिकाहरुमा बिभिन्न प्रकारका समाचारहरु छापिएका थिए । त्यतिकैमा राजधानीबाट प्रकाशित हुने एउटा राष्ट्रीय दैनिक पत्रिकामा छापिएको समाचारले निकै मन दुखायो । जहाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमै ठुलाठुला अक्षरमा शिर्षक छापिएको थियो “बलात्कार ः न्याय खोज्दा अन्याय” । त्यसमा छापिएका बलात्कार सम्बन्धी बिभिन्न घटनाहरुको बारेमा पढ्दा मन निकै दुखी भयो । उल्लेखित बलात्कारका घटनाहरु अधिकांश अर्थात ७० प्रतिशत आफ्न्तहरुबाटै भएको उल्लेख थियो । छरछिमेकी, साथिभाइ तथा प्रेमीहरुबाट पनि थुप्रै बलात्कारका अपराध हुने गरेको उल्लेख थियो । कतिपय घटनाहरु पश्चात बलात्कृतको हत्या भएको र कतिपय अचेत बन्ने गरेको उल्लेख थियो । अझै घिनलाग्दो कुरा त के थियो भने बलात्कारमा आफ्नै बुबा, हजुरबुवा